पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सक्छ. 21 2019 |2मिनेट पढ्न
Summertime समान मित्र र परिवारका साथ समय फिर्ता लात र आनंद ले को लागि सही समय हो. यो पनि केहि मजा आनन्द उठाउन सही समय हो, छैन आफ्नो संख्या-को-को-मिल मिति. तापक्रमहरू गिरा छ, लामो समय पछि ठूलो सम्झनाहरु मा फीका पक्का हो कि यी पाँच अद्वितीय गर्मिहरूको मिति विचार बाहिर जाँच.
कैनोइंग साहसिक: सवारीसाधन दूरी भित्र कतै नदी वा ठूलो ताल त्यहाँ भने, एक स्थान भेटी डोंगी पनि त्यहाँ एक धेरै राम्रो मौका त्यहाँ (वा कश्ती) भाडा. यी कारोबार थुप्रै गर्मी महिनामा मात्र खुला छन्, त्यसैले पहिले नै दिन को लागि बाहिर जाँच तपाईं मात्र उपलब्ध डुङ्गा सबै पत्ता लगाउन स्थान गर्न पुग्दाका निराशाको तल गरौं हुनेछैन भन्ने पहिल्यै सम्म प%. अक्सर Groupon जस्तै साइटहरु पनि यस्तो भाडा लागि सम्झौता, त्यसैले यी प्रस्ताव को एक को बनाउन प्रयोग मार्फत पैसा बचत पनि एक सम्भावना हुन सक्छ. तपाईं र तपाईंको मिति दुवै राम्रो तरिकाले आफ्नो साहसिक समयमा खुवाउनु राख्न पनरोक कन्टेनरमा एक पिकनिक खाजा प्याक.
फ्रिसबी वा मिनी गोल्फ चुनौतीहरू: गर्मी महिना समयमा गाढा बोलिङ मैदान छोड्नुहोस् र सट्टा यी मजा गोल्फ विकल्प मध्ये एक चयन. मिनी गोल्फ / उनको पुष्ट क्षमता अनिश्चित कसैको लागि "सुरक्षित" विकल्प हुन अप्ठ्यारो गर्दा, अधिक athletically झुकाव एक मौका ले र एक स्थानीय फ्रिसबी गोल्फ कोर्स बाहिर जाँच गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ. मात्र यी गतिविधिहरु को दुवै खाडी अप्ठ्यारो चुपचाप रहेर लागि सिद्ध हो, तर तिनीहरू पनि तपाईं तिनीहरूलाई सिद्ध राख्दा / फालिरहेका फारम बाहिर आंकडा मदत रूपमा आफ्नो मिति एक सानो नजिक हुने ठूलो तरिकामा छौं. गर्मिहरूको समयमा सामान्यतया केवल खुला एक स्थानीय हिउँ शंकु shack-अर्को व्यवसाय गर्न एक यात्रा संग आफ्नो मिति सिध्याउन.
डग पार्क मिति: तपाईं र तपाईंको मिति दुवै उत्सुक कुकुर प्रेमी हो भने, तपाईं मजा को एक साँझको टाउको रूपमा पछि आफ्नो कुकुर साथीहरू छोड्ने कुनै आवश्यकता छैन. यो अनौठो होइन गर्दा तिनीहरूलाई जाडो महिनामा बन्द गर्न को लागि, सबै भन्दा स्थानीय कुकुर पार्क गर्मिहरूको समयमा खुला छन्. हुनसक्छ भने, अनलाइन समीक्षा पढ्न पक्का हुन र तिनीहरूलाई तपाईंको कुकुर र मिति ल्याउन अघि विशेष कुकुर पार्क लागि विशेष नियमहरू को कुनै पनि अनुसन्धान. कुनै कुकुर पार्क आफ्नो क्षेत्र मा खुला हुन देखिएमा, आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य संग एक कुकुर-पैदल मिति छुट्याउने रोजेर पनि सट्ट. आराम सुन्दर र तपाईं मिति समयमा हाइड्रेटेड सबैलाई राख्न अतिरिक्त पानी ल्याउन हेरविचार गर्न.
बाहिरी थियेटर शाम: न्यानो साँझ फाइदा लिन र आफ्नो स्थानीय कला दृश्य बारेमा एक बिट बढी सिक्न. थुप्रै सहर बाहिरी थिएटर घटनाहरू लागि टिकट लागि स्वतन्त्र वा कम मूल्य प्रदान, संगीत देखि संगीत चिरबिर गर्न शेक्सपियर नाटक लिएर प्रदर्शन संग. स्थानीय ब्यान्डको पनि अक्सर साथ गर्मी महिना समयमा विभिन्न बाहिरी स्थानहरुमा शो प्रदर्शन गर्दै. कुनै बाहिरी प्रदर्शन कला विकल्प आफ्नो क्षेत्र मा उपलब्ध हुन देखिएमा, बरु कुनै ड्राइव-मा फिलिम थिएटर मा देख विचार; एक जी प्रदर्शन रूपमा भए तापनि लगभग एउटै छैन, ड्राइव-मा थिएटर अझै पनि तिनीहरूलाई एक निश्चित अनन्त गुण.
Geocaching: यस प्राविधिकरुपले केवल गर्मी महिना मात्र सीमित गर्नुपर्छ भनेर एक गतिविधि छैन गर्दा, राम्रो मौसम राम्रो मौका पक्कै एक geocaching मिति समयमा भएको मजा आफ्नो मौका चोट छैन. एक मित्र देखि एक जीपीएस प्रणाली उधारो वा आफ्नो खोज मा सहायता गर्न आफ्नो स्मार्टफोन प्रयोग, र आफ्नो मिति मा शुरू हुनुअघि स्थानीय geocaches अनुसन्धान. पनि क्यास मा छोड्ने तपाईं र तपाईंको मिति लागि एक मजा वस्तु संग ल्याउन लागि निश्चित हुनुहोस्!
5 विजयी वैवाहिक सञ्चार बाधा गर्न चाल्नुपर्ने कदम
अनलाइन डेटिङ: हित Catfished जोगिनु
एक पत्रु रहनेवाला पत्ता लगाउने
© Copyright 2019 तिथि मेरो पत्रु. संग गरे द्वारा 8celerate स्टूडियो